ဘီး (အလှပြင်ပစ္စည်း) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘီး သည် လူများ အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အသွားများပါရှိပြီး ဦးရေနှင့် ဆံပင်တို့ကို သန့်ရှင်းရန်၊ အလှပြင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန် စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ဘီးသည် ရှေးအကျဆုံးပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်ကို ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ပါရှားပြည် (ယခု အီရန်) နိုင်ငံတွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကတည်းက နေထိုင်သူများသည် ဘီးကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၁၈၇၀ ခုနှစ်၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် Felix Schurig ဖြင့် သူမ၏ ဆံပင်ကို ဖြီးနေပုံ
၁ အကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်
၃ အသုံးပြုမှုနှင့် အမျိုးအစား
ခေတ်မီသတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဘီး
ဘီးတွင် အရိုးတံတစ်ခုနှင့် အသွားများ ပါရှိသည်။ အသွားများသည် ရိုးတံပေါ်သို့ ထောင့်မတ်ကျအနေအထားဖြင့် တည်ရှိသည်။ ဘီးပြုလုပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများစွာ ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် ပလတ်စတစ်၊ သတ္ထု သို့မဟုတ် သစ်သားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ပြင် တိရစ္ဆာန်တို့၏ အစွယ်များ၊ လိပ်ခွံများဖြင့်လည်း ပြုလုပ်ကြသည်။သို့သော်လည်း ထိုသို့ တိရစ္ဆာန်များမှ ထုတ်လုပ်ကာ အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချလာကြသည်။ သစ်ပင်မှ ပြုလုပ်ရာတွင် ချယ်ရီသား၊ boxwood နှင့် အခြားသော အသားကောင်းမွန်သည့် သစ်သားများကို အသုံးပြုကြသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် သစ်သားဘီးများကို လက်ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး အချောကိုင်ကြသည်။
ဘီးများသည် လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ကာ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဆံပင်ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုမည့်ဘီးသည် အသွားစိပ်ရမည်၊ ဆံပင်များကို ခွဲခွာနိုင်ရန် သွယ်၍ ရှူးသော လက်ကိုင်ပါရမည်။ ဆံပင်ဖြီးရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဘီးများ၏ တစ်ဝက်သည် အသွားကျယ်ကာ အခြားတစ်ဝက်သည် ဆံမင်များကို သန့်ရှင်းရာတွင် အသုံးပြုသည်။ Hot comb များကို မြောက်အမေရိကတွင် ကိုလိုနီခေတ်များ အတောအတွင်း ဖြောင့်စင်းသောဆံပင်များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
ဝက်မှင်ဘီး (hairbrush) သည် လက်ဖြင့် အသုံးပြုရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် တို့မှ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် ဘီးတစ်ခုထက် ပိုမိုကြီးသည်။ ဆံပင်ပုံစံများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စတိုင်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆံပင်များ သန့်ရှင်းခြင်း စသည်တို့တွင် အသုံးပြုကြသည်။ ၁၉ ရာစုတွင် ဘီးနှင့် ဝက်မှင်ဘီး (hairbrush) ကို ပေါင်းစပ်ကာ သိသိသာသာ အသုံးပြုလာကြသည်။
ရှေးခေတ်အီဂျစ်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဘီး၊ ဘီစီ ၁၅ ရာစု
ဘီးများကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ သမိုင်းအထောက်အထားအရ ရှည်လျားသော ဆံပင်များကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဆံပင်များကို လှပအောင် ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကျစ်ဆံမြီးပုံ ဆံပင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း စသည်တို့တွင် အဓိက အသုံးပြုကြသည်။
အလုပ်ရုံများနှင့် လက်မှုပညာလုပ်ငန်းများတွင် အစေ့မှ ဝါချည်ကို ခွဲထုတ်ရန်နှင့် အခြားအစအနများကို စစ်ထုတ်ရန် ဘီးများကို အသုံးပြုကြသည်။
↑ Internet Archaeol. 30. Ashby. An Atlas of Medieval Combs from Northern Europe. Summary။ Intarch.ac.uk (2011-09-23)။ 2012-01-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vaux, William Sandys Wright (1850-01-01). Nineveh and Persepolis: An Historical Sketch of Ancient Assyria and Persia, with an Account of the Recent Researches in Those Countries (in en). A. Hall, Virtue, & Company။
↑ Sandell, Hanne Tuborg (1991-01-01). Archaeology and Environment in the Scoresby Sund Fjord (in en). Museum Tusculanum Press. ISBN 9788763512084။
↑ White, Carolyn L. (2005-01-01). American Artifacts of Personal Adornment, 1680-1820: A Guide to Identification and Interpretation (in en). Rowman Altamira. ISBN 9780759105898။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Sherrow, Victoria (2006-01-01). Encyclopedia of Hair: A Cultural History (in en). Greenwood Publishing Group. ISBN 9780313331459။
↑ Laing, Lloyd Robert (2006-06-29). The Archaeology of Celtic Britain and Ireland: C.AD 400 - 1200 (in en). Cambridge University Press. ISBN 9780521838627။
↑ Hodder, Ian (1997-01-01). Interpreting Archaeology: Finding Meaning in the Past (in en). Psychology Press. ISBN 9780415157445။
↑ Corporation, Bonnier (1937-09-01). Popular Science (in en). Bonnier Corporation, 39။
↑ Cooley, Arnold James (1866-01-01). The Toilet and Cosmetic Arts in Ancient and Modern Times (in en). R. Hardwicke။
↑ (1895-01-01) The Canadian Patent Office Record and Register of Copyrights and Trade Marks (in en). Patent Office, 437။
↑ Roberts, Edward A. (2014-04-10). A Comprehensive Etymological Dictionary of the Spanish Language with Families of Words based on Indo-European Roots: Volume II (H - Z and Appendix) (in en). Xlibris Corporation. ISBN 9781493191116။
↑ Wolfe, Richard J. (1990-01-01). Marbled Paper: Its History, Techniques, and Patterns : with Special Reference to the Relationship of Marbling to Bookbinding in Europe and the Western World (in en). University of Pennsylvania Press. ISBN 0812281888။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီး_(အလှပြင်ပစ္စည်း)&oldid=382944" မှ ရယူရန်
၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။